Gabar Soomaali ah oo Xaafidul Quraan ah oo aad u qurux badan oo la lagu hayo takoor, lana gooni yeelay Waa Maxay Sababta Abwaan is Celin Waayey oo Afka Furtay. | shumis.net
Home » galmada » Gabar Soomaali ah oo Xaafidul Quraan ah oo aad u qurux badan oo la lagu hayo takoor, lana gooni yeelay Waa Maxay Sababta Abwaan is Celin Waayey oo Afka Furtay.
Gabar Soomaali ah oo Xaafidul Quraan ah oo aad u qurux badan oo la lagu hayo takoor, lana gooni yeelay Waa Maxay Sababta Abwaan is Celin Waayey oo Afka Furtay.
Waa gabar Xafidul Quraan ah misena diinta ku wanaagsan aad ayeyna u qurux badan tahay joog iyo jamaal ayaa ilaahay siiyey midabkeeda waa casaan indhaheeda waa sida hablihii lagu sheegay xuural ceynta Ma Buurna Caatana ma ahan waa dhex dhexaad Dabeecadeeda waa qof furfuran oo aad u qosol badan.
Hadaba Maxaa dhacay Gabadhani ayaa lagu takooray Qaab qabiil iyo waa lagaa tiro badan yahay Reerkaada nama geeyaan oo iyada maxaa ka galay halkani Guji si aad u ogaato xog badan oo calool xumo ah.
Abwaan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Idirix Axmed Dooxa Joog ayaa arintaasi ka tiriyey Maanso Cajiib ah iyadoo ay dhiiga iyo dhuuxa ay dhaqaajnayso Qof kasta oo Soomaaliyeed oo daawada Maansadaasi isagoo taabanaya runta iyo xaqiiqda jirta iyo wixii ka dhacay dalkeena Soomaaliya haba ugu badnaadaanee yasida iyo faquuqa loo geystay Soomaalida inteeda kale.
Shaki kuma jiro in arimahaasi ay dhacday dad badan oo Soomaaliyeed na tacadiyadaasina loo geystay aysana jirin cid raali gelin ka bixisay ama ka qoomameysay waxase kasii daran ilaa hadda ayaa dad daba jooga oo aanan ka waabsan ama aanan ka quusan ee aqristow daawo Muuqaalka kore ee Farta Buluuga ah.
Title: Gabar Soomaali ah oo Xaafidul Quraan ah oo aad u qurux badan oo la lagu hayo takoor, lana gooni yeelay Waa Maxay Sababta Abwaan is Celin Waayey oo Afka Furtay.